Midowga Yurub oo ka Hadlay Markab Somaliland Shidaal u Siday oo la Qafaashay | Berberanews.com
Home WARARKA Dibadda Midowga Yurub oo ka Hadlay Markab Somaliland Shidaal u Siday oo la...
Midowga Yurub oo ka Hadlay Markab Somaliland Shidaal u Siday oo la Qafaashay
Dubai (Jam/AP)- Ciidammada badda Midoga Yurub, ayaa si rasmi ah uga hadlay shalay markab shidaal u siday shirkadda waddaniga ah ee Red Sea oo ku soo jeeday dhinaca Somaliland, kaasoo koox budhcad-badeed ah ka qafaasheen biyaha waddanka Cummaan.
Mr. Harrie Harrison oo ka mid ah saraakiisha ciidammada badda Midowga Yurub oo la hadlay wakaaladda wararka AP, ayaa sheegay in kooxo budhcad-badeed ah afduubteen markabka shidaalka siday oo lagu magacaabo MV JUBA XX, kuna sii jeeday dekedda magaalada Berbera, isaga oo xusay in markabkaasi ka mid ahaa maraakiibta yaryar ee shidaalka qaada, kaas oo ka soo kicitimay dhinaca Imaaraadka Carabta.
Sarkaalkan ka tirsan ciidammada badda Midowga Yurub wax tafaasiil ah oo intaa dhaafsan Kama bixin afduubashada lagula kacay markabka shidaalka u siday Somaliland ee dhexda loo galay.
Markabka MV JUBA XX ee la qafaashay waxa uu shidaal u siday shirkadda waddaniga ah ee Red Ses, kaasoo la filayey inuu muddooyinka soo socda ku soo xidho dekedda magaalada Berbera, balse maalintii Jimcaha ayey koox budhcad-badeed ahi dhexda ka qafaalatay, kuwaasi oo ula kacay dhinaca xeebaha maamulka Puntland.
Afduubka markabkan ayaa ku soo beegmay xilli shidaal yaraani ka jirto magaalooyinka Somaliland, iyada oo dad badani naawilayeen in shidaalka yimaad dalku uu wax badan ka tari doono baahida shidaal yarida dalka laga dareemay.
Previous articleDhacdooyin ugub ku ah taariikhda somaliland sanadka m.siilaanyo talada hayay!
Next articleSomaliland: Female Police Officer Gunned Down In Lasanod City